မျက်နှာပြင်ခြစ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲ။ Semalt မှအဖြေ
မျက်နှာပြင်ခြစ်ကဘာလဲ? ၎င်းသည်အင်တာနက်မှအချက်အလက်များကိုခြစ်ပြီးသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ မျက်နှာပြင်ခြစ်ခြင်းသည်အသုံးပြုသူ၏သွင်းအားစုများကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုမြင်နိုင်သောနှင့်မမြင်နိုင်သော UI အရာဝတ္ထုများကိုပါပစ်မှတ်ထားအသုံးပြုသည်။
အချက်အလက်စုဆောင်းရန်နှင့်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည့်မည်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီမဆိုမျက်နှာပြင်ခြစ်ခြင်းမှအကျိုးရှိနိုင်သည်။ မျက်နှာပြင်ခြစ်ခြင်း၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာ၎င်းသည်မဖွဲ့စည်းထားသောနှင့်ကြမ်းတမ်းသောဒေတာများကိုစနစ်တကျဖတ်နိုင်သောဖတ်နိုင်သည့်အရွယ်အစားဖြင့်အသွင်ပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဤကိရိယာသည်စီးပွားရေးသမားများအားအမြီးတိုနှင့်အမြီးရှည်သောသော့ချက်စာလုံးများကိုပစ်မှတ်ထား။ ပြိုင်ဘက်များ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်များမှဖော်ပြချက်များသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာများကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ဆရာဝန်များသည်ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထုတ်ယူရန်မျက်နှာပြင်ခြစ်ဆေးကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးကဏ္ related နှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများရှိပြီးဆရာ ၀ န်များက ၄ င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီဤအချက်အလက်များကိုစုစည်းနိုင်သည်။
မျက်နှာပြင်ခြစ်ကဘာလဲ? ညာဘက်ခြစ်ရာနေရာကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။ ဤတွင်သင့်အလုပ်ကိုလွယ်ကူစေမည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖန်သားပြင်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ခြစ်စက်နှစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးတင်ပြထားသည်။
UiPath သည်မျက်နှာပြင်ခြစ်ခြင်းကိုရှေ့ဆောင်လုပ်ခဲ့ပြီးအင်တာနက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးနှင့်အကျော်ကြားဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီ application ၏အထင်ရှားဆုံးအင်္ဂါရပ်များအနက်တစ်ခုမှာဒေတာများကို ၁၆ မီလီစက္ကန့်အတွင်းဖြတ်နိုင်ပြီး ၁၀၀% တိကျမှုရှိသည်။ UiPath မတိုင်မီ၊ screen scraping သည်တိကျမှုနှုန်းနိမ့်ကျပြီး၊ ပြတ်သားပျက်စီးလွယ်သောတိကျသော OCR ၏အဓိပ္ပာယ်တူဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာမှာ၊ ဒီကိရိယာသည်မတူညီသောဝဘ်စာမျက်နှာများမှသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ယူနိုင်သည့်တီထွင်ထားသောစက်သင်ယူမှုနည်းပညာဖြစ်သည်။ UiPath သည် operating systems အားလုံးနှင့် web browser များနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပြီးသင့်အားဒေတာများကိုအလွန်ဂရုစိုက်။ ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။ သင်သည်ဒီ tool ကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သော dynamic web page များကိုပစ်မှတ်ထားနိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင် screen scraping မျိုးစုံကိုပြီးမြောက်နိုင်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်သင့်အားတိကျသောစာမျက်နှာတစ်ခု၏တိကျသောစာသားတန်ဖိုးများကိုရရှိရန်နှင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များအတိုင်းဖျက်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်ခြစ်ချင်သောဝဘ်ဆိုက်ကိုသာမီးမောင်းထိုးပြရန်လိုသည်။
UiPath ကဲ့သို့ပင် Mozenda သည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဖန်သားပြင်ခြစ်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရာနှင့်ချီသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်အချက်အလက်များကိုအဆင်ပြေစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ Mozenda သည်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်ကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်သူများအတွက် ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကဤ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီတိကျမှန်ကန်စွာပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်အလက်များအတွက်အားကိုးသည်။ သင်ဟာသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်လား၊ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Mozenda သည်သင့်အတွက်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ဒီအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ကိရိယာဖြင့်သင်သည်ဒေတာသိုလှောင်မှုအမြောက်အများကိုအလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများစွာကိုပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်။ ဖျက်လိုက်သောအချက်အလက်များကို Google Drive, Box.net သို့မဟုတ် Dropbox တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ ဒီမျက်နှာပြင်ခြစ်ခြင်းကိရိယာသည်အကောင်းဆုံးနှင့်သင့်လျော်သောခြစ်ခြင်းနည်းစနစ်ကိုအလိုအလျောက်ရွေးချယ်ပြီးသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင့်အလုပ်များကိုပြီးမြောက်စေသည်။ Mozenda သည်သင်မြင်နိုင်သောစာသားကို UI အရာဝတ္ထုများမှဖျက်ထုတ်ပြီးဝက်ဘ်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်။ ဖတ်နိုင်သည့်အရွယ်အစားဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။